တရုတ် PP ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်လုပ်ခြင်းစက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူ | Zhuoya
PP ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်သည် အမျိုးမျိုးသောဆံပင်ပုံစံ၊ ဆံပင်တုစတိုင်ထုတ်ကုန်များအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်မည့် ဓာတု PP ဆံပင်ဆံပင်တု monofilament ပြုလုပ်ရန်အတွက် အပြီးသတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြစ်သည်။
PP ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်သည် PP ကုန်ကြမ်းဆံပင်အမျှင်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ monofilament PP ဆံပင်ဖိုက်ဘာကို အမျိုးမျိုးသောဆံပင်ပုံစံ၊ ဆံပင်တုပုံစံအဖြစ် ပြုပြင်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PP ဓာတုဆံပင်ဖိုက်ဘာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို PP ကုန်ကြမ်းနှင့် ဆံပင်ဖိုက်ဘာများ၏ နည်းပညာလိုအပ်ချက်အရ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းစဉ်ဒီဇိုင်း၊ ရင့်ကျက်သော လုပ်ငန်းစဉ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည် ကောင်းမွန်သော elasticity၊ တောက်ပသောအရောင် စသည်တို့ဖြင့် အရည်အသွေးမြင့် PP ဆံပင်ဖိုက်ဘာကို ထုတ်လုပ်ပေးပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအဆင့်များ ပါဝင်သည်-
PP ကုန်ကြမ်းရောနှောခြင်း → နို့တိုက်ခြင်း → extruder → အမျှင်ပုံသွင်းခြင်း → အအေးခံရေတိုင်ကီ → ဆန့်နိုင်ယူနစ် → ရေနွေးကန် → ဆီအပေါ်ယံပိုင်း → အပူပေးခြင်း မီးဖို → အကွေ့အကောက်များသော စက်
ကွဲပြားခြားနားသောကုန်ကြမ်းများနှင့် ဓာတုဆံပင်အမျှင်များ၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားလိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စျေးကွက်အတွင်းရှိ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းမော်ဒယ်အောက်ကို အဓိကထားပေးပါသည်။
မော်ဒယ် ZYLS-70 ZYLS-80
ဝက်အူ L/D ၃၀:၁ ၃၀:၁
ဂီယာဘောက်စ် မော်ဒယ် 200 200
ပင်မမော်တာ 30kw 30/37kw
စွမ်းရည် (kgs/h) 40-60 ကီလိုဂရမ်/နာရီ 70-80kgs/h
Mold Dia 200 200
Filament Dia 0.06-0.12mm 0.06-0.12mm
1. စိတ်ချပါ ဓာတုဆံသားမျှင်များ ထုတ်လုပ်မှုကို စိတ်ချပါ။
3. ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ရင့်ကျက်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှု
4. ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုမီ အောင်မြင်သောထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို အမှားရှာပြင်ခြင်း။
5. ဖောက်သည်များ စိတ်ချမ်းသာစေရန် တစ်ခုတည်းသော ဝန်ဆောင်မှုစနစ်
6. အင်ဂျင်နီယာသည် တပ်ဆင်ခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ရန် ဖောက်သည်စက်ရုံသို့ သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပေါင်းစပ်လူ့ဆံပင်၊ periwig၊ ဆံပင်ညှပ်၊ toupee၊ peruke၊ bob ဆံပင်တု၊ ဦးထုပ်ဆံပင်တု၊ brazilian ဆံပင်၊ ဖြောင့်သောဆံပင်၊ pixie ညှပ်ဆံပင်တု၊ bob wig၊ afro kinky wig၊ fringes wig၊ crotchet wig၊ ဇာဆံပင်တုအပြည့်အစုံ၊ ဇာရှေ့ဆံပင်တု၊ ponytail ဆံပင်တု၊ မမြင်နိုင်သော အစိတ်အပိုင်း ဆံပင်တု၊ အပိတ်ဆံပင်တု စသည်တို့။
ယခင်- PET ဓာတုဆံပင်ချည်မျှင်ပြုလုပ်သည့်စက်
နောက်တစ်ခု: လက်ကားစျေးနှုန်း တရုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်/PBT အတု Faux Fake Eye Lashes Extension Filament/Fiber/Hair Production Machine
ဆံပင် Filament Extrusion Line အတု
ဆံပင် Filament ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတုဆံပင် Monofilament Drawing Extruder
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတုဆံပင် Monofilament ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Synthetic ဆံပင်ဖိုက်ဘာစက်